दर्शकले म्यूजिक भिडियोमा कती रुचाए दयाहाङलाई ? – MB Khabar
दर्शकले म्यूजिक भिडियोमा कती रुचाए दयाहाङलाई ?
MB Khabar १० भाद्र २०७७, बुधबार
नायक दयाहाङ राइलाई भर्सटायल कलाकार भनिन्छ । उनले अभिनय गरेका चलचित्रको व्यापारिक सफलता वा असफलता आफ्नो स्थानमा होला, तर उनले भने दर्शकको मन जितेका छन् । यसैले त दयाको अभिनय हेर्नैका लागि दर्शक हलसम्म जान्छन् ।
तर, दयाले पाएको सफलता जोगाउन नसकेको पनि भनिन्छ । अफर आएका चलचित्र नछाड्दा दया सस्तो देखिए । उनको अभिनयको फ्यान भएकाहरुले उनको चलचित्र हेर्न छाडे । यसैले, उनले अभिनय गरेका धेरै चलचित्र असफल पनि भए ।उनै, दया फाट्टफुट्ट म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गर्छन् । लकडाउन खुलेपछि दयाले मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका २ वटा म्यूजिक भिडियोमा काम गरे । चलचित्रमा रुचाइएका यी कलाकारको म्यूजिक भिडियो भ्यूजको आधारमा र समिक्षाको आधारमा सफल भयो त ?
नायक विपिन कार्कीले अभिनय गरेको ‘डर छैन’ बोलको म्यूजिक भिडियोले दर्शकको तारिफ पायो । भ्यूज औषत भएपनि यो भिडियोमा विपिनको कामलाई रुचाइएयो । तर, दयाले भिडियोबाट तारिफ भने बटुलेका छैनन् । दयाले नायिका आँचल शर्मासँग अभिनय गरेको ‘त्यो तिमी हौं’ बोलको गीतले ३ दिनमा ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी भ्यूज पाएको छ । गीतले दर्शकको साथ औषत पाएपनि दयाको कामको खासै चर्चा भएन ।
यस्तै, उनी अभिनित अर्को म्यूजिक भिडियो ‘बल्ल बल्ल भेट भो’ रिलिज भएको ३ साता बढी भयो । तर, यो भिडियोले ६ लाख ६५ हजार भ्यूज पाएको छ । यो दयाको स्टारडम अनुसार निकै कम भ्यूज हो । दयाले नै अभिनय गरेको ‘जहाजै चढेर’ बोलको गीत रिलिज भएको एक महिना बढी भयो । यो गीतले ५ लाख ५५ हजार भ्यूज बटुलेको छ । यसरी हेर्दा, दयाले अभिनय गरेका पछिल्ला ३ म्यूजिक भिडियो सफल देखिएका छैनन् । केही भिडियोको कन्सेप्ट राम्रो छन् भने कतिपय भिडियोहरु औषत मात्र छन् । जसलेगर्दा, दयाको गीतले दर्शकको उल्लेख्य साथ नपाएको देखिन्छ ।
‘ख्यास्स पुतली’ शब्दमा आपत्ति जनाउंदै दुर्गेशलाई बहिष्कार
रोकिएको ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ सोमबारदेखि प्रशारणमा आउने
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को ‘नक आउट’ आजबाट
फिल्म नहुँदा आजबाट खुलेनन् हलहरु
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्लान् त राजेश हमाल ?